Warshadda Shooladda Kaamamka - Soo-saareyaasha Foornada Foornada ee Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
Foornooyinka xeradeenu waa khafiifa, la isku halleyn karo, ammaan ah oo si fudud loo isticmaali karo kariyaha dalxiis ee kuleylinta teendho yar ama baabuur. Waxay leeyihiin daboolid heer sare ah iyo xakameynta kuleylka, waxaa tijaabiyey kumanaan xero ah. Noqo mid sax ah oo lagu farsameeyay 304 birta birta ah ee adkeysiga badan leh, si fiican u maareysa kuleylka sare, waligiisna ma daxooleynayo mana qallajinayo, taas oo ka dhigaysa shooladahan kaamamku ku habboon yahay adeegsiga jawiyada dibadda ee adag. Sida karinta meelaha madadaalada yar yar sida teendhooyinka derbiga shiraaca, teendhooyinka dawanka shiraaca, yuts, daaqadaha, guryaha kaluumeysiga barafka, guryaha yar yar, badalashada basaska iyo waxyaabo kale oo badan. Waxay ku habboon yihiin kuleylka iyo karinta meelaha yaryar.
- 304 Bir Daxal La ': Waxaa loo adeegsaday karinta, kululaynta, kaamaynta, marna miridhku ama daxal, ku habboon jawiga dibadda ee qalafsan.
- Waa fududahay in la qaado: 10 kg oo keli ah oo dhinaca waxaa ku yaal xamuul ku habboon.
- Meel-dhigasho: Lugaha si fudud ayey isu laabaan, oo qiiqa waa la kala qaadi karaa oo lagu keydin karaa caloosha shooladda.
- Kulayl la hagaajin karo: Waa la shaabadeeyey si aad u kululaato adigoon qiiq ka daadan. Qiijiyeyaasha qiiqa dusheeda, way fududahay in lagu hagaajiyo kuleylka iyo waqtiga gubashada.
- Ku habboon cunto karinta: Dusha sare ee dusha sare waxaa loogu talagalay inuu bixiyo aag aad wax ku karin karto, oo ku habboon jaceylka dibedda.
- Ka sameysan bir bir ah: Xoog leh oo waara aan miridh lahayn, ku habboon jawiga dibadda ee qalafsan.
- Naqshad la qaadan karo: Kaliya 10 kiilo oo leh cabbirkeeda is haysta, kan ugu wanaagsan ee alwaax guba waxaa loo dhisay inuu safro.
- Bakhaar ku habboon: Dhammaan qaybaha tuubbada qiiqa waxay ku tiirsadaan jirka shooladda teendhada, 4-lugood oo naqshadaysan ayaa isku laaban foornada.
- Sedex daawade: Astaamaha lagu muujiyo waxaa ka mid ah 3 daaqadaha daawashada muraayadaha oo ku yaal albaabka iyo dhinacyada isbadalka iyo maaraynta dabka.
- Ku habboon karinta: Kariyaha alwaaxa shukumaanku wuxuu ku faanaa dabool saxan kulul oo la saari karo si uu u yeesho olol furan si uu u leefleeco gunta hoose ee dheriga, in badan oo kaantaroolka ah marka la karinayo
- 304 Bir Daxal La 'Sameeyay: Waxay ka kooban tahay 304 dhisma bir bir ah, oo aan waligeed miridhnaan doonin ama xoorinaynin, ku habboon jawiyada dibadda ee qalafsan.
- La qaadan karo: Isaga ayaa qaadi kara kaligiis, qalabka wax lagu rakibo ayaa loo isticmaali karaa inuu xamili karo marka la laalaabo.
- Meel lagu keydin karo: 4-lugood oo nashqadeeyaha isugu laaban foornada hoosteeda; Qaybaha tuubada qiiqa waxay ku dhajistaan ​​jirka shooladda, khaanadaha dhinacyadu waa la wada laaban karaan iyagoo ah mashiinka xambaara kaydinta iyo gaadiidka si fudud.
- Ku habboon cunto karinta: Waxay ku faantaa dabool saxan kulul oo la saari karo si ay u yeelato olol furan si ay u leefleexdo dheriga hoostiisa, in badan oo kaantaroolka ah marka la karinayo
- Codsi ballaadhan: Waxay leedahay wadar dhan 2.4 m dherer ah oo leh dheecaanno si loo hubiyo ku habboonaanta dhammaan noocyada teendhada ama daaraha.
- Albaabku wuxuu leeyahay hawo-xakamaynta hawada iyo daaqad muraayad ah oo loogu talagalay maaraynta dabka iyo jawiga
- Daaqadda daawashada ee ballaaran ee jawiga iyo maaraynta dabka
- Heerarka dhinacyada dhinacyadu waxay amaahiyaan kala-duwanaanta karinta oo ay u labanlaabaan sidii wax lagu qaato
- Si aad ah loo qaadi karo - Lugaha buulshaha iyo armaajo guntooda u laalaada jirka jikada; Qulqulayaashu waxay ku ridi karaan jirka jikada
- Naqshad ballaadhan oo 4-lugood leh ayaa ka caawinaysa shooladda inay ku xasilloon dusha sare
- Naqshad gaar ah: oo leh sanduuqa dabka ee leydilaalka ah, oo buul ku leh 4-lugood iyo nashqadeynta foornada, runtiina noqo mid gaar u ah adduunka, wuxuu bixiyaa jawi yaab leh markii la shaqeynayo.
- Adeeg waara: 304 ahama dhisme sax ah oo si saxa u adkaysi u leh, ku habboon jawiga banaanka.
- Qalabka badan: Waxaa ku jira 1 jirka wax lagu kariyo, 6 qaybood oo ah 300 mm dhererka dhuumaha, 1 dambi qabe, 1 xoq dambas.
- ku habboon in la qaado: Naqshad si fudud loo qaadan karo. Buul Buugga 4-lug ayaa loogu talagalay laalaabka, qaybaha tuubbada qiiqa ku dhaji gudaha jirka shooladda iyo khaanadaha dhinacyadu waxay u shaqeeyaan sidii xammuul qaadista.
- Ku habboon Meelaha yaryar: Waxay ku habboon tahay kuleylka iyo karinta meelaha yaryar sida teendhooyinka shiraac, guryaha yaryar iyo kuwo kale.
Foornada Cuntada lagu karsado, Bannaanka Alwaaxda Gubashada, Kaamamka Biyaha Lagu kariyo ee Kaamamka ah, Teendhada Qoryaha Teendhada, Kaam Dabka Gubay, shooladda birta ah ee birta ah,